China ZBR1001J Optical Receiver လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | Zongju
ZBR1001JL optical receiver သည်နောက်ဆုံးပေါ် 1GHz FTTB optical လက်ခံသည်။ ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးကိုလက်ခံရရှိသည့် optical power၊ မြင့်မားသော output နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် NGB ကွန်ယက်တည်ဆောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။
■ Input Optical Power range သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော Optical AGC control technique ဖြစ်သည် -9＋2dBm၊ ထွက်ရှိမှုအဆင့်၊ CTB နှင့် CSO သည်အခြေခံအားဖြင့်မပြောင်းလဲပါ၊
■ Downlink အလုပ်လုပ်သောကြိမ်နှုန်း 1GHz သို့တိုးချဲ့ပြီး RF amplifier အစိတ်အပိုင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော GaAs ချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ အမြင့်ဆုံး output level level 112dBuv;
■ EQ နှင့် ATT နှစ်ခုလုံးသည် professional electric control circuit ကိုအသုံးပြုသည်။
■အဆင့်မြင့်အမျိုးသားအဆင့် II အဆင့်ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုရှိပြီးဝေးလံခေါင်သီသောကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပံ့ပိုးသည် (ရွေးချယ်နိုင်သည်);
■ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် FTTB CATV ကွန်ယက်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်သောပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။
3. နည်းပညာ Parameter
Optical Return ဆုံးရှုံးမှု
Optical Connector အမျိုးအစား
SC / APC သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူမှသတ်မှတ်ထားသော
တစ်ခုတည်းသော mode ကို
ZBR1001J (FZ110 ထွက်ရှိမှု)
အများဆုံး output ကိုအဆင့်
≥ 108 (-9 ~ + 2dBm optical power)
≥ 104 (-9 ~ + 2dBm optical power လက်ခံရရှိခြင်း)
≥ 112 (-7 ~ + 2dBm optical power လက်ခံရရှိခြင်း)
≥ 108 (-7 ~ + 2dBm optical power)
(-9dBm / -8dBm / -7dBm / -6dBm / -5dBm / -4dBm) - (+ 2dBm) ညှိနိုင်သော
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု EQ အကွာအဝေး
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု ATT အကွာအဝေး
ဖြေ AC (150 ~ 265) V
: D: DC က 12V / 1A ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့ရေး
မှတ်ချက် ၁ - ပြုပြင်သည် 59 မှာ PAL-D ကို Analog ရုပ်သံလိုင်းအချက်ပြမှုများ 550MHz ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး။ ၏ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးမှာဒစ်ဂျစ်တယ် signal ကိုထုတ်လွှင့် 550MHz~862MHz။ ဒစ်ဂျစ်တယ် signal level (8 MHz bandwidth ကို) ဖြစ်ပါတယ်10Analog စ signal ကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဆင့်ကိုထက်နိမ့် dB ။ အဆိုပါ optical လက်ခံ၏ input ကို optical ပါဝါအခါ-1dBm, output ကိုအဆင့်: 108dBμV, EQ: 8dB ။
၄ : Dပုံကြမ်း
II လူတန်းစားကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတုံ့ပြန်နှင့်အတူ ZBR1001J, FZ110 (ထိပုတ်ပါ) output ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုပုံ
II အတန်းအစားကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတုံ့ပြန်နှင့်အတူ ZBR1001J, FP204 (two-way splitter) output block block
ZBR1001J FZ110 (ထိပုတ်ပါ) output ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုပုံ
ZBR1001J FP204 (Two-way splitter) output block block
Input Optical Power နှင့် CNR ၏ ၅. ဆက်စပ်ဇယား
၆။ Optical Fiber Active Connector ၏သန့်ရှင်းမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်း
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ပစ္စည်းအမှားများကြောင့် optical power ကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ် optical receiver output ပမာဏလျော့နည်းခြင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လွဲမှားစွာဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် optical fiber opt connector နှင့်မမှန်သောဆက်သွယ်မှု connection ကြောင့်သို့မဟုတ် fiber fiber connector ကြောင့်ညစ်ညမ်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်ဖုန်။
ယခု fiber optic connector ၏ပုံမှန်သန့်ရှင်းမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းလမ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါ။
၁။ adapter မှ optic fiber active connector ကိုပိတ်ပါ။ Optical fiber active connector သည်မတော်တဆထိခိုက်မှုမှရှောင်ရှားရန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်းကိုမရည်ရွယ်သင့်ပါ။
2. အရည်အသွေးကောင်းသည့်မှန်ဘီလူးနှင့်ဆေးဘက် ၀ င်မှုလျော့နည်းစေသောအရက်ဝါဂွမ်းဖြင့်ဂရုတစိုက်ဆေးကြောပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆီလျှော့ထားသောအရက်ဝါကိုသုံးလျှင်ဆေးကြောပြီး ၁ မိနစ်မှ ၂ မိနစ်ခန့်စောင့်ရမည်။ connector မျက်နှာပြင်ကိုလေထဲ၌ခြောက်စေပါ။
၃. သန့်ရှင်းထားသော optical fiber fiber active connector ကို optical power meter နှင့်ချိတ်ဆက်သင့်ပြီး output ပါဝါ optical ကိုတိုင်းတာသည်။
4. သန့်စင်ပြီးသော fiber fiber active connector ကို adapter ဆီပြန်ထည့်လိုက်ရင် adapter အက်ကြောင်းထဲမှကြွေထည်ပြွန်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အင်အားသင့်လျော်အောင်သတိထားသင့်သည်။
အကယ်၍ output optical power သည်သန့်ရှင်းပြီးနောက်ပုံမှန်မဟုတ်ပါက adapter ကိုပိတ်ပြီးအခြား connector ကိုသန့်ရှင်းပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်တွင်ပါဝါပါဝါနိမ့်နေပါက adapter သည်ညစ်ညမ်းနေပြီး၎င်းကိုသန့်ရှင်းပါ။ (မှတ်စု: အမျှင်အတွင်း၌မထိခိုက်စေရန် adapter ကိုပိတ်လိုက်ပါကသတိထားပါ။
adapter ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှါအပ်နှံထားသောချုံ့ထားသောလေထုသို့မဟုတ် degrease အရက်ဝါဂွမ်းဘားကိုအသုံးပြုပါ။ compressed air ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ compressed air tank ၏မြေပုံသည် adapter ၏ကြွေပြွန်ကိုရည်ညွှန်းသင့်သည်။ degrease အရက်ဝါဂွမ်းဘားကိုသုံးပါကသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ကြွေပြွန်ထဲသို့အရက်ဝါဂွမ်းဘားကိုဂရုတစိုက်ထည့်ပါ။ ထည့်သွင်းမှု ဦး တည်ချက်သည်တသမတ်တည်းဖြစ်သင့်သည်။
7. ပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်
1. ကတိပေးသည်။ (၁၃) လအခမဲ့အာမခံ (စက်ရုံချိန်ကိုထုတ်ကုန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလက်မှတ်ကိုစတင်ပါ။ ) တိုးမြှင့်အာမခံသက်တမ်းထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီး။ ကျနော်တို့တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းကိရိယာအမှားသည်အသုံးပြုသူများမလိုအပ်သောလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်ရှောင်လွှဲမရသောပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တာ ၀ န်ယူမှုကိုထိန်းသိမ်းပြီးသင့်လျော်သောပစ္စည်းကုန်ကျမှုများကိုတောင်းခံပါမည်။
2. ပစ္စည်းကိရိယာများပြိုကျသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအကူအညီ hotline 8613675891280 ကိုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပါ
အထူးအသိပေးစာ - ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသူများကထိန်းသိမ်းထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်တော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံပါမည်
ရှေ့သို့ LC OM1 Duplex Patch ကြိုးသို့ LC
နောက်တစ်ခု: LC OM2 Duplex Patch ကြိုးသို့ LC
ZHR1000P FTTH မှန်ဘီလူး